Tirada na soo booqday.	Maanta13173shalay32471Isbuucaan82550Isbuucii hore319617Bishaan839465Bishii hore985537Maalmaha oo dhan4657635Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 305 guests, 1 members Your IP: 23.22.252.150 , Today: May 21, 2013	Qabqablayaashii Dalka iyo dadka dhibaateeyey oo loo ogolaaday inay ka mid noqdaan Baarlmanka Mahiga.
Written by Maamul on 10 September 2012. Buuq, muran iyo sawaxn ayaa is qabsaday hoolka Shirka Doorashada madaxweynaha Reer Galbeedka dabada Ogeysiis… Bogga Idaacadda Islaamiga ah Alfurqaan wuu nabad qabaa.
Written by Maamul on 10 September 2012. Idaacadda Islaamiga ah Alfurqaan waxay ku wargelineysaa Akhristayaasha iyo Dhageystayaasheeda kala socon Waaliga wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan oo kormeer ku maraya degmooyin ka tirsan wilaayada. (SAWIRO) Written by Maamul on 10 September 2012. Waaliga wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan Sheekh Yuusuf Cali Ugaas ayaa weli waxa uu wadaa kormeero Dad gaaraya 70-ruux oo xalay lagu qabqabtay magaalada Baladweyne.
Written by Maamul on 10 September 2012. Amaanka magaalada Baladweyne ayaa faraha ka baxay iyadoo ay ka dhaceen Qaraxyo iyo dilal ayaa Mujaahidiinta oo xalay weeraray saldhigyada cadawgu ay ku leeyihiin degmada Shalanbood.
Written by Maamul on 10 September 2012. Dagaallo culus oo u dhaxeeyey Ciidamada Afrikaanta iyo Maleeshiyada TFG-da oo isku dhinac ah iyo Maxay ka Dhigan tahay Taay-qaadasho La'aanta Shariif iyo Xaasaskiisa uu Dhinacyada iska Taagay By: Qoraa C/Waaxid Khaliif
Written by Maamul on 10 September 2012. Ilaah baa mahad leh. Ammaan iyo nabadgelyo Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato:- Inkastoon Shariif sheekh A
Wararkii ugu dambeeyey Doorashada Madaxweynaha Muqdisho.
Written by Maamul on 10 September 2012. Waxaa maanta lagu wadaa in Baarlaman isu sheega Mahiga ay magaalada Muqdisho ku doortaan Madaxweyne Dhurwaagu ma Xalaal Baa? Sheikh Xassaan Xuseen Xafidahullaah (DHAGEYSO + AKHRISO)
Written by Maamul on 10 September 2012. Dhurwaagu waa xayawaan ku nool oo ku badan dalka Soomaaliya, waxa uu inta badan dhibaato ku hayaa reer Mmoja wa wake wa Sharif Sheikh Ahmed aanguka ghafla wakati bwana wake akiwa kwenye Hotuba. (TAZAMA VIDEO)
Written by Maamul on 10 September 2012. Hali ya tahruki imetanda ktk Ukumbi wa Hoteli ya City plaza iliyopo Mjini Mugadishu wakati Rais Bashiir Salaad na Balozi Agustine Mahiga wakubaliana Kubadilisha Manhaj ya Madrasa za Qur'an,
Written by Maamul on 10 September 2012. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Somalia Balozi Agustine Mahiga na Bashiir salaad ambae ni mwenye Mid ka mid ah xaasaska Shariif oo caawa istaaga ka dhacday xili uu odaygeedu Khudbaynayey (DAAWO)
Written by Maamul on 09 September 2012. Waxaa caawa Hotelka City Plaza oo ay ka socotay Xaflad taageero doon ah oo uu soo abaabulay Shariif Mid ka mid ah Maleeshiyaadka PS-ta oo caawa lagu dilay Degmada Wardhiigley.
Written by Maamul on 09 September 2012. Xoogag hubaysan ayaa caawa Degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir ku toogtay mid ka mid ah Maleeshiyaadka Bashiir Salaad iyo Mahiga oo isla gartay in manhaj loo sameeyo Dugsiyada Qur'aanka kariimka ee Muqdisho. (DHAGEYSO)
Written by Maamul on 09 September 2012. Ergayga Qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Augostin Mahiga iyo Sheekh Bashiir Axmad Salaad Shariif Sheekh Axmed oo waji gabax kala kulmay Prof: Jawaari.
Written by Maamul on 09 September 2012. Iyadoo maalinta bari oo Isniin ah lagu wado in Magaalada Muqdisho ay ka dhacaan doorashada Reer Qarax goordhow ka dhacay Xaafada Suuqa Xoolaha.
Written by Maamul on 09 September 2012. Laba maleeshiyo ayaa ku dhimatay afar kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib qarax lagu weeraray Faroole oo ku hanjabay in Puntland ay qaadanayso go’aan ay aayaheeda uga tashanayso haddii dib loo soo celiyo...
Written by Maamul on 09 September 2012. Hogaamiyaha maamulka Ashahaado la diririka ee Puntland C/raxmaan Faroole ayaa sheegay in maamulkiisa Saddex Ruux oo xalay siyaabooyin kala duwan loogu dilay magaalada Boosaaso.
Written by Maamul on 09 September 2012. Wararka laga helayo Magaalada Boosaaso ayaa waxay sheegayaan xalay magaaladaasi siyaabooyin kala Mujaahidiinta Soomaaliya oo xalay weeraro ku qaaday fariisimo ay Muqdisho ku leeyihiin Ciidamada Shisheeye iyo maleeshiyaadka TFG-da.
Written by Maamul on 09 September 2012. Dagaal yahanada Mujaahidiinta Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa weeraro qorsheysan ku qaadeen Je waifahamu Wilaya ya Eel Alli iliyopo Mkoani Hiraan Somalia?(TAZAMA PICHA)
Written by Maamul on 09 September 2012. Tunajaribu kuwaletea baadhi Maelezo ya Miji na Mikoa ambao iko chini ya Sharia ya Allah (Subhanahu Maaskari police wa Sirikali Dhaifu ya Somalia yajeruhiwa kwa Mlipuko wa Bomu.
Written by Maamul on 09 September 2012. Maaskari police wa TFG wameshtukia wakishambuliwa kwa Guruneti la kurushwa Mkono ktk Mtaa wa Yaqsheed i
Wanajeshi wa Tawheed waingia KULBIYOW Bila Makabiliano ya Vita Baada ya wanajeshi wa Kenya Kuikimbia.
Written by Maamul on 09 September 2012. Jeshi la kislaam la Harakat Al-shabaab Al mujahideen wameidhibiti mji wa KULBIYOW iliyo karibu na Fariisimo Difaac u ahaa Marka Oo Xalay La weeraray
Written by Maamul on 09 September 2012. Abaaro sideed saac Markay saacaddu ku beegneyd ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka Mujaahidiinta waxay weerar Qarax khasaare geystay oo caawa ka dhacay Degmada Yaaqshiid.
Written by Maamul on 08 September 2012. Waxaa caawa qarax bamgacmeed qasaare geystay oo lala eegtay Maleeshiyaad ka tirsan TFG-da lagula PICHA: Vipi Hali ya Biashara ktk Jiji la Kismaayo Somalia?
Written by Maamul on 08 September 2012. Jiji la Kismaayo ni moja kati ya Miji mikuu ya Somalia ambao ina Hadhi ya kuwa Jiji baada ya Mugadishu Start«81828384858687888990»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan